Mwari Ane Hanya Newe Here? (Pisarema 40:17)
“Ndinotambudzika uye ndiri murombo; Jehovha anondifunga.” *—DHAVHIDHI WEMUISRAERI YEKARE.
“Marudzi akaita sedonhwe remvura riri mumugomo.”—ISAYA 40:15
Zvaiva nemusoro here kuti Dhavhidhi atarisire kuti Mwari afunge nezvake? Mwari ane hanya newe here? Vanhu vakawanda vanoona zvakavaomera kubvuma kuti Mwari wemasimbaose ane hanya navo. Nei?
Chimwe chikonzero ndechokuti Mwari akanyanya kukwirira zvikuru kupfuura vanhu. Kana zvichienzaniswa nekukwirira kwaakaita, marudzi ose “akaita sedonhwe remvura riri mumugomo; uye anoonekwa seguruva shomanana riri pachikero.” (Isaya 40:15) Mumwe munyori wemazuva ano asingabvumi kuti Mwari ariko akagumisa kuti, “kuzvikudza chaiko kudavira kuti kuna Mwari ane hanya nezvaunoita.”
Ukuwo, vamwe vanhu vanofunga kuti maitiro avo anoita kuti Mwari asava nehanya navo. Somuenzaniso mumwe murume anonzi Jim anoti: “Ndaigara ndichinyengetera kuti ndizvidzore uye ndigarisane nevamwe, asi ndaizongogumbuka chete. Ndakazopedzisira ndava kufunga kuti ndakanga ndaipa zvokuti zvakanga zvisisaiti kuti Mwari andibatsire.”
Mwari ari kure nevanhu zvokuti angatadza kutifungawo here? Anombonyatsonzwa sei nezvedu isu vanhu vanotadza? Kana Mwari akasaita kuti timuzive, hapana munhu angambokwanisa kutaura achimumiririra, opindura mibvunzo iyoyo. Zvisinei, Bhaibheri, shoko rakafemerwa raMwari rinotiratidza kuti haasi Mwari ari kure, asina hanya nesu. Rinotiudza kuti, ‘Chokwadi, haasi kure nomumwe nomumwe wedu.’ (Mabasa 17:27) Munyaya ina dzinotevera, tichakurukura zvatinoudzwa naMwari nezvekuva kwake nehanya nevanhu uye kuti akaratidza sei kuva nehanya nevanhu vakangofanana newe.
^ ndima 3 Pisarema 40:17; Jehovha ndiro zita raMwari rinotaurwa muBhaibheri.